एकाएक कसरी भयो १५ किलो सुन चाँदी ? — SuchanaKendra.Com
एकाएक कसरी भयो १५ किलो सुन चाँदी ?
काठमाडौं, । प्रहरीले कमलादीमा सुरक्षा जाँच गरिरहेको थियो। त्यही बेला बा.६च ५५१९ नम्बरको सेतो रङको स्कर्पियो प्रहरीले रोक्न खोज्यो। तर गति बढाएर गाडी भाग्यो। प्रहरीले पिछा गर्‍यो। त्यसको सुइँको पाएपछि कपडाको झोला फ्याँकेर गाडी भागेको प्रहरीले जनाएको थियो।
दरबारमार्गका डीएसपी दाहाल बिहीबार प्रहरी प्रतिष्ठानमा तानिएका छन्। सुन काण्डमा लापरवाही गरेका र छानबिनलाई प्रभावित गर्न सक्ने भनेर उनलाई प्रतिष्ठानमा तानिएको महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीले जनाएको छ। दाहालको ठाउँमा प्रतिष्ठानका डीएसपी रामेश्वर पौडेललाई ल्याइएको छ । सुवास गोतामे र उपेन्द्र अर्यालले अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।